Magic Finger Condom – MM Online Shopping
Magic Finger Condom
Magic လကျ​​ခြောငျးကှနျ​ဒုံး တဈ​ခါ MM မှာ​စြေးးနှုနျးခြိုသာပီး magic လို ဆနျးပြားတဲ့ ခံစားမှု ​ပေးနိုငျ​တဲ့ magic လကျ​​ခြောငျး​လေး​တှေ ​ရောကျ​​နပေါပီ ￼ ​
silicone ဖွငျ့ ပွုလုပျထားပွီး .အရှယျအစားအားဖွငျ့ 35mm*60mm ရှိပါတယျ.
တုနျခါမပါ ရိုးရိုးအစှပျသီးသနျ့ပါ ရစေိုခံပါတယျ
ဘျော​​ဘျော​​တှေ ခဈြ​သူ ကို ပွုစု ဖို့ အတှကျ￼အတူမ​နခေငျ​မှာ လကျ​​ညိုး​လေးကို အသုံးပွုပီး ကာမစိတျ​ ကို နိုးစှ​ပေးကွမှာပါ ဒီ​နရောမှာ ပုံမှနျ​ လကျ​ညိုး​လေးကိုသုံးတာထကျ​ နူးညံ့တဲ့ ဗွုတျ​ က​လေးမြားစှာ ပါတဲ့ magic လကျ​​ခြောငျး ကှနျ​ဒုံး​လေးကို လကျ​ညိုးမှာ စှပျ​ပီး သုံးကွညျ့​လိုကျ​ပါ ပုံ မှနျ​ထကျ​ မြားစှာကှဲပြားတဲ့ အသဈ​အဆနျး ခံစားမှုကို ရရှိ​စပေီး အတူမ​နခေငျ​မှာပငျ​ ထှနျ့​ထှနျ့​ လူးပီး ခံစားမှု အထှတျ​ အထိပျ​ကို​ရောကျ​​စမှော အ​သခြောပါပဲ
မမ​တှလေညျး ခါတိုငျး လကျ​ ညိုး ​လေး ကို အသုံး ပွုပီး အာသာ​ဖွေ တာ ထကျ​ maggic လကျ​​ခြောငျး​လေးကျို သုံးပီး ဟိုးးးအတှငျးထဲ ထိ ​မှေ ​နှောကျ​ကလိကွညျ့​လိုကျ​ပါ ​နောကျ​ဆို magic လကျ​​ခြောငျး မှ magic လကျ​​ခြောငျးဆိုပီး တမျးတ​နေ​စမှောပါ
အသုံးပွုနညျး Magic လကျ​​ခြောငျး ကို​ရစေငျ​​အောငျ​​ဆေး​ကွောပါ ဆပျ​ပွာမသုံးရ မိမိလကျ​ညိုးကို​ခြောဆီအနညျးငယျ​သုတျ​ ပါ ပီး​နောကျ​ magic လကျ​​ခြောငျးကိုစှပျ​ပီး အသုံးပွုလို့ရပါပီ ￼
video ဖွငျ့ ကွညျ့ရှုလို့ပါက
Magic လက်​​ချောင်းကွန်​ဒုံး တစ်​ခါ MM မှာ​ဈေးးနှုန်းချိုသာပီး magic လို ဆန်းပျားတဲ့ ခံစားမှု ​ပေးနိုင်​တဲ့ magic လက်​​ချောင်း​လေး​တွေ ​ရောက်​​နေပါပီ ￼ ​
silicone ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး .အရွယ်အစားအားဖြင့် 35mm*60mm ရှိပါတယ်.
တုန်ခါမပါ ရိုးရိုးအစွပ်သီးသန့်ပါ ရေစိုခံပါတယ်
ဘော်​​ဘော်​​တွေ ချစ်​သူ ကို ပြုစု ဖို့ အတွက်￼အတူမ​နေခင်​မှာ လက်​​ညိုး​လေးကို အသုံးပြုပီး ကာမစိတ်​ ကို နိုးစွ​ပေးကြမှာပါ ဒီ​နေရာမှာ ပုံမှန်​ လက်​ညိုး​လေးကိုသုံးတာထက်​ နူးညံ့တဲ့ ဗြုတ်​ က​လေးများစွာ ပါတဲ့ magic လက်​​ချောင်း ကွန်​ဒုံး​လေးကို လက်​ညိုးမှာ စွပ်​ပီး သုံးကြည့်​လိုက်​ပါ ပုံ မှန်​ထက်​ များစွာကွဲပျားတဲ့ အသစ်​အဆန်း ခံစားမှုကို ရရှိ​စေပီး အတူမ​နေခင်​မှာပင်​ ထွန့်​ထွန့်​ လူးပီး ခံစားမှု အထွတ်​ အထိပ်​ကို​ရောက်​​စေမှာ အ​သေချာပါပဲ
မမ​တွေလည်း ခါတိုင်း လက်​ ညိုး ​လေး ကို အသုံး ပြုပီး အာသာ​ဖြေ တာ ထက်​ maggic လက်​​ချောင်း​လေးက်ို သုံးပီး ဟိုးးးအတွင်းထဲ ထိ ​မွှေ ​နှောက်​ကလိကြည့်​လိုက်​ပါ ​နောက်​ဆို magic လက်​​ချောင်း မှ magic လက်​​ချောင်းဆိုပီး တမ်းတ​နေ​စေမှာပါ
အသုံးပြုနည်း Magic လက်​​ချောင်း ကို​ရေစင်​​အောင်​​ဆေး​ကြောပါ ဆပ်​ပြာမသုံးရ မိမိလက်​ညိုးကို​ချောဆီအနည်းငယ်​သုတ်​ ပါ ပီး​နောက်​ magic လက်​​ချောင်းကိုစွပ်​ပီး အသုံးပြုလို့ရပါပီ ￼
Be the first to review “Magic Finger Condom” Cancel reply